Åkesson oo doonaya inuu noqdo dareenka dawlad garabka midig - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay måndag 28 augusti 2017 kl 16.59
Åkesson: Dawladdii u daneeysa hawl-gabka ayaannu la shaqeeyn doonnaa
Jimmie Åkesson oo ka khudbeeynaya Sölvesborg. sawir: Johan Nilsson/TT
Hoggaamiyaha xisbiga Sverigedemokraterna (SD) Jimmie Åkesson ayaa khudbaddiisii kuleeylaha ku qabtay magaalada uu ka soo jeedo ee Sölvesborg.
Isagoona khudbaddiisa ku soo qaatay waxyaabo ey ka mid yihiin inay dawladda ugu habboon ee uu xisbiga SD qaybta ka ahaan lahaa ay tahay dawlad ey ku mideey-san yihiin xisbiyada Kristdemokraterna (KD), Moderaterna (M) – iyo xisbiga Sverigedemokraterna. Dawlad noocaasi ahina u shaqeeyn lahayd mabaadiida ”Dareenka bulshada”.
–Maadaama aannu nahey garab xisbiyo bulsho qun-yar socod ah oo noqon kari lahayd dareenkii bulshada ahna meesha uu xisbiga M ka dhutinayo, waxaa loola jeedaa kolka laga hadleyo kooxaha bulshada ee dhibaateey-san, sida qoysaska, howl-gabka dhaqaalaha liita, shaqaalaha dawladda ama goobaha shaqo ee haweenku ku badan yihiin. Waa halka uu xisbiga Moderaterna ku guul darreeystay muddadii siddeeda sannadood ahayd ee uu talada dalka hayay. Waa halka aannu gacanta ka geey-san kari lahayn sidii xaaladdooda loo hagaajin lahaa, sida uu sheegay Jimmie Åkesson.
Dayrtii ina dhaaftay ayay ahayd kolkii uu markii ugu horreeysay uu xisbiga SD shaaca ka qaaday in midda xisbiga ugu habboon ay noqon lahayd iney dawlad wada dhisaan xisbiyada KD iyo M. Hase yeeshee aanu weli dhex marin wax wada hadal ah labada xisbi ee KD, M iyo xisbiga Sverigedemokraterna, sida uu sheegay Jimmie Åkesson.
–May, wax wada hadal ah arrintaa kama aannu yeelan. Haddiise la dhageeysto Anna Kinberg Batra waxay weli rajeeynaysay inay dawlad la dhisato garabka Alliansen-ka, hase yeeshee waxaa bulshada ka jira hab fikir isa soo xiray. Waxay kaloo dareemaysaa in aanay middaasi suurtagal ahayn, waxaa marka dhici karta inay dhankayaga u soo jalleecdo, waana mid aannu soo dhoweeyneyno oo aannu diyaar u nahey inta aan la gaarin doorashada.
Kolka laga yimaado xaafadaha ey dhibaatooyinku ka taagan yihiin iyo brexit (ka bixiddii ay Boqortooyada Ingiriisku kaga baxday ururka EU) ayuu khudbaddiisa xoogga ku saaray Jimmie Åkesson howl-gabka fakhrigu la soo gudboonaaday. Xisbiga SD wuxuu doonayaa inuu kor u qaado aasaaska gunnada howl-gabka 10%, sida uu khudbaddiisa ku sheegay Jimmie Åkesson. Iyadoona uu xisbigiisu taageeri doono dawladda wax ka qabata sidii loo hagaajin lahaa dhaqaalaha howl-gabka fukharada ah. Hase yeeshee aan xaqiiqdii khudbadda lagu sheegin dhabbadii loo mari lahaa.
–Ama in si un loo hagaajiyo dhaqaalaha howl-gabka fukharada. Waa mid laga wada xaajoon doono fikirrada la soo ban-dhigi doono, sida uu sheegay Jimmie Åkesson, hoggaamiyaha xisbiga Sverigedemokraterna oo magaalada Sölvesborg ku qabtay khudbaddiisii kuleeylaha.
måndag 28 augusti 2017 kl 17.02
V: Taageerada ardayda oo 300 koron kor loo qaadey
måndag 28 augusti 2017 kl 14.55